५ झुट, जसले सम्बन्धलाई टुटाइदिन सक्छन्
सम्बन्ध चाहे जुनसुकै होस् यदि त्यसमा विश्वास, प्रेम तथा एक अर्कोप्रति गरिने इज्जतको अभाव छ भने त्यस्तो सम्बन्ध हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।
सम्बन्धमा इमान्दारीता हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । जबसम्म इमान्दारीता रहन्छ तबसम्म कुनैपनि आँधीबेहेरीले सम्बन्धलाई हल्लाउन सक्दैन तर यदि सम्बन्धमा झुटको प्रवेश भयो भने त्यसले सम्बन्ध टुटाउन कुनै बेर लाग्दैन ।
आमरुपमा मानिसहरु सधै साधुजस्तै सत्य बोल्न सायद सम्भव पनि छैन होला । त्यसलै आपसी सम्बन्धमा पनि साना ठूला झुट बोलिएकै हुन्छ । मानिसहरुले दाम्पत्य सम्बन्धमा बोल्ने मुख्य ५ झुट जसले सम्बन्धलाई टुटाइदिन सक्दछन् ती यस्ता छन्ः
१. के तपाइँलाई लाग्दछ की ऊ केवल तपाइँको मात्रै हो ? ऊ केवल तपाइँकै बारेमा मात्र सोँच्दछ ? हुनसक्छ उसले तपाइँलाई धोका दिइरहेको हुनसक्छ । उसको जिवनमा तपाइँ बाहेक अरुपनि हुनसक्छ र त्यो कुरा उसले लुकाइरहेको हुनसक्छ । आफ्नो विवाह भैसकेको वा अफेयरमा रहेको कुरा लुकाउनु यस्तो झुट हो, जुन धेरैले बोल्दछन् । त्यसैले सम्बन्धको सुरुवात गर्नुअघि यस विषयमा आस्वस्त भएर मात्र अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ ।
२. कहिलेकाहीँ मानिसहरु आफ्नो आर्थिक अवस्थाको विषयमा पनि झुटो बोल्दछन् । सामुन्नेको मानिसलाई प्रभावित पार्नका लािग झुटो शान तथा रवाफ देखाउने बानी हुन्छ धेरैको । प्रेम वा दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत आर्थिक अवस्थाको विषयमा झुटो बोल्ने धृष्टता गर्नु निकै प्रत्युत्पादक हुने निश्चित हुनछ । त्यसैले कसैसँग सम्बन्धको सुरुवात गर्नुअघि उसले देखाउने आर्थिक हैसियतको रवाफका विषयमा राम्रोसँग क्रसचेक गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
३. कहिलेकाहीँ मानिसहरु परिवारसँग सम्बन्धि विषयमा पनि झुटो बोल्दछन् । आफ्नो परिवारका मानिसहरुको व्यवहार तथा उनीहरुका अन्य विषयमा पनि सही कुरा बोल्दैनन् ।
४. कहिलेकाहीँ मानिसहरुले दोहोरो चरित्रमा सम्बन्धलाई अघि बढाउँछन् । उनीहरुको वास्तविकता एउटा हुन्छ तर अर्कै रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् । तर यस्तो झुट लामो समयसम्म टिक्दैन र कुनैदिन वास्तविक कुरा बाहिर आएरै छाड्छ ।
५. कहिलेकाहीँ मानिसहरु आफ्नो रोगको विषयलाई पनि लुकाउँछन् । जिउमा कुनै रोग भएपनि स्वस्थ रहेको झुट बोल्दछन् र सोही अनुरुपको व्यवहार गर्दछन् । तर यसरी कुनै बिमारी लुकाउनुले सम्बन्धमा दरार त ल्याउँछ नै जिवनलाई नै बर्बाद गरिदिन सक्छ ।